Health – See More…
သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး အသိအလွဲများအတွက် အခုအချိန်မှာ ဒီစာကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်သွားပါ
February 8, 2022 Anonymous
သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး အသိအလွဲများအတွက် အခုအချိန်မှာ ဒီစာကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်သွားပါ ရေသန့် ကျိုချက် မသောက်ရဘူးဆိုတာ မဟုတ်ပါ…ရေသန့်ဆိုမှတော့ ကျိုသောက်စရာ မလိုတာပါ ။ ဒါပေမဲ့ ရေနွေးကျိုသောက်၊ထမင်းချက်လည်းရပါတယ်။ ဘယ်အဆိပ်မှ ဖြစ်မှာ မဟုတ်။ ဓာတ်ဆား အပြာက ဘာအတွက် ၊ဓာတ်ဆား အစိမ်းက ဘာအတွက် shareနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး
နှစ်ရှည်လများ ဒူးနာ၊ ခါးနာ၊လက် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ဝေဒနာတို့အတွက် ဂွေးတောက်ရွက်နှင့် သနပ်ခါး အစွမ်း
October 25, 2021 October 25, 2021 Anonymous
နှစ်ရှည်လများ ဒူးနာ၊ ခါးနာ၊လက် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ဝေဒနာတို့အတွက် ဂွေးတောက်ရွက်နှင့် သနပ်ခါး အစွမ်း အမျိုးသမီးများ အဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ ဒူး ခါး လက်တို့ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ဝေဒနာဆိုးကို သက်သာပျောက်ကင်းစေမယ့် ကိုယ်တွေ့ ဆေးနည်းကောင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဂွေးတောက်ရွက် အနည်းငယ်ကိုထောင်း ထွက်လာတဲ့ အရည်နဲ့ သနပ်ခါးကို သွေး
ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် မကြာမကြာ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း အတွက်
October 19, 2021 October 19, 2021 Anonymous
ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက် မကြာမကြာ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း အတွက် ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း အတွက် ဖြီးကြမ်း ဌက်ပျောသီး မှည့်မှည့် ချောင်းဆိုးခြင်း ကို ချောင်းခြောက် နှင့် ချွဲသလိပ်တို့ စုဝေး ပိတ်ဆို့ ခြင်း ဟူ၍ အဓိက အားဖြင့် နှစ်မျိုး နှစ်စား ခွဲခြား ထားပါ တယ်။
အ ဆုတ် ကို သန့် စင် ပေး နိုင် ပြီး အား ကောင်း စေ သော အ စား အ စာ ( ၁ ၀ ) မျိုး….
October 13, 2021 October 13, 2021 Anonymous
အ ဆုတ် ကို သန့် စင် ပေး နိုင် ပြီး အား ကောင်း စေ သော အ စား အ စာ ( ၁ ၀ ) မျိုး…. ( ၁ ) ကြက်
အဆဈရောငျ ဂေါကျ(Gout)ရောဂါအတှကျ ရှောငျရနျ ဆောငျရနျမြား
October 11, 2021 Anonymous
အဆဈရောငျ ဂေါကျ(Gout)ရောဂါအတှကျ ရှောငျရနျ ဆောငျရနျမြားအဆဈရောငျနာ (Gout) ရောဂါ သကျသာစဖေို့ရာ အတှကျ အစားအသောကျတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍ ကလညျး အရေးပါနပေါတယျ။ ဂေါကျရောဂါ အတှကျ အစားအသောကျ ပုံစံဟာ လူအမြားစု ကနျြးမာဖို့ရာ စားသငျ့တဲ့ အစားအသောကျ ပုံစံနဲ့တော့ ခပျဆငျဆငျ ပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဂေါကျရောဂါ
October 11, 2021 October 11, 2021 Anonymous
ကြောကျကပျမှာ တဈခုခုဖွဈနပွေီဆိုရငျ သိနိုငျတဲ့ လက်ခဏာ (၉) မြိုး ကြောကျကပျရောဂါဟာ ထူးခွားတဲ့ရောဂါ လက်ခဏာမပွတဲ့အတှကျ ရောဂါကြှမျးတဲ့ အခွအေနရေောကျမှသာ သိကွတာမို့ ကြောကျကပျရောဂါနဲ့ပတျသကျပွီး သတိထားမိအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ ၁. အခြိနျတိုငျးလိုလိုမောပနျးနခွေငျး ကြောကျကပျမကောငျးဘူးဆိုတာနဲ့ ခန်ဓာကိုယျတှငျးမှာ အဆိပျ အတောကျတှေ မြားလာစသေလို သှေးမသနျ့တော့တာကွောငျ့ မောပနျးပွီး လေးလံ
October 10, 2021 Anonymous
ဆရာBetexဆေးကခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်၊ဇက်ကြောတက်ပျောက်ကင်းပါသလား? ရေရှည်သောက်ရင်ကောအစာအိမ်ထိခိုက်နိုင်ပါသလား ဆရာဝန်နဲ့သွားပြတော့ဒီဆေးကိုဆွဲသောက်ရမယ်ပြောပါတယ် ကျနော်အသက်၃၅နှစ်၊အိမ်ထောင်မရှိပါအကြောင်းပြန်ပေးစေလိုပါတယ်။ ဒီBetexဆိုတာဗီတာမင်ဘီသုံးမျိုးကိုအချိုးကျပေါင်းစပ်ထားတဲ့အာရုံကြောဆေးတမျိုးပါ။ အာရုံခံဆဲလ်၊နာ့ဖ်ဆဲလ်တွေရဲ့ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုပေါ်အကျိုးသက်ရောက်တယ်။ နာတာရှည်ထုံကျင်၊ညောင်းညာကိုက်ခဲ၊အကြောတင်းနေသူ၊ထိတွေ့မှုအာရုံနည်းပါးသူ၊ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေမှာလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်ဘီဝမ်း၊စစ်၊တွဲကိုအချိုးကျပေါင်းစပ်ထားတယ်။ ဆေးဖြစ်တဲ့neurobionအပြာကဒ်neurorubinနဲ့neurovitဆိုတဲ့ကဒ်တွေနဲ့ပါဝင်တာအတူတူပါပဲ။ ကွာခြားတာကဈေးနှုန်းနဲ့ကဒ်ပျော့ဖြစ်နေတာလောက်ပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံကဆရာဝန်အများစုကအသက်ကြီးသူအတွက်အာရုံကြောအားဆေးထည့်တဲ့အခါneurobionအပြာကဒ်(သို့) ဒီBetexကိုအသုံးပြုကြတယ်။ဒီBetexကneurobionထက်သုံးဆမကဈေးပိုကြီးတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံFavorexကထုတ်လုပ်ထားတယ်။ ဒီBetexထဲမှာပါဝင်တာတွေက- VitaminB1(ဒthiaminemononitrate)100mg VitaminB6(ပpyridoxine)200mg VitaminB12(ဟcyanocobalamine)200mcg စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဘီရဲ့အာနိသင်တွေကများတယ်။သက်ရှိဆဲလ်တိုင်းရဲ့စွမ်းအင်အတွက်ဗီတာမင်ဘီလိုအပ်ပါတယ်။ ဆဲလ်တွေရဲ့ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုအတွက်အရေးပါတယ်။ စားလိုက်တဲ့ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကစွမ်းအင်ထုတ်ရာမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်။ မျိုးဗီဇဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်မှာလည်းအရေးကြီးပြန်တယ်။ နာဖ့်ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့acetylcholineဖွဲ့စည်းရာမှာလည်းပါဝင်တယ်။ အာရုံကြောနဲ့ကြွက်သားလုပ်ဆောင်ချက်ကောင်းမွန်စေဖို့ကူညီပေးတယ်။ နာ့ဖ်ကြောမျှင်၊နာ့ဖ်ကိုအုပ်ထားတဲ့မိုင်ရာလင်အလွှာmyelinsheathတွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးတယ်။ပြုပြင်ပေးတယ်။
October 6, 2021 Anonymous
ရုံးပတီသီးကိုအစိမျးလိုကျတို့စားရတာကွိုကျရငျဒီစာလေးကိုဖတျကွပါ ကြှနျတျောရှာရောကျတော့ရုံးပတီသီးစိုကျသညျ့တောငျသူတဈဦးမှပွောပွသဖွငျ့ထပျဆငျ့မြှဝခွေငျးဖွဈပါသညျ။ ရုံးပတီသီးကိုအစိမျးတို့စားရတာကွိုကျသညျဆိုကရုံးပတီသီးကိုဆားရညျဖွငျ့နာရီဝကျခနျ့စိမျပွီးမှစားပါရနျအကွံပေးပါသညျ။ ရုံးပတီသီးကွိုကျသောပိုးမှားမြားတှငျလှေးပိုးသညျနှိမျနငျးရနျအခကျခဲဆုံးပိုးဖွဈ၏၊ အပငျကိုဖကျြဆီးသောထိုပိုးသညျအကောငျမမွငျရ၊ဆေးမြိုးစုံသုံးသျောလညျးထိုပိုးကိုမနိုငျ။ ထို့ကွောငျ့စိုကျပြိုးရေးဝနျကွီးဌာနကတားမွဈထားသောအန်ဒိယမှလာသညျ့ဆေးတဈမြိုးကိုသုံးကွ၏၊ ထိုဆေးကိုသုံးမှရုံးပတီပငျကိုဖကျြဆီးသောလှေးပိုးကိုနိုငျ၏၊ ရုံးပတီ-အပငျသနျ၏၊အသီးလှ၏၊သို့သျောထိုဆေး၏အာနိသငျကားအလှနျပွငျးထနျလှ၏၊ ဆေးသုံးစှဲသဖွငျ့သသေောပိုးကောငျကိုငှကျစားကငှကျသေ၏၊ ထိုသသေောငှကျကိုခှေးကစားမိပွနျကခှေးသေ၏။ ထိုဆေးအာနိသငျကားပိုးကောငျလညျးသေ၊ပိုးကောငျသစေားသောငှကျလညျးသေ၊ ငှကျသစေားသောခှေးလညျးသသေဖွငျ့သုံးဆငျ့ခနျ့အာနိသငျပွငျးထနျ၏။ ထိုကဲ့သို့အာနိသငျပွငျးထနျသောဆေးကိုနိုငျငံတျောကတားမွဈထားပွီးစိုကျပြိုးရေးပညာပေးဟောပွောမှုတှပွေုလုပျပါသျောလညျး အရငျးမရှုံးလိုသောတောငျသူမြားကမှောငျခိုဝငျလာလို့ရလြှငျသုံးစှဲမညျသာဖွဈ၏။ ထိုအာနိသငျပွငျးသောဆေးကိုယနပေ့ကျဖနျြးပွီးမနကျဖွနျရုံးပတီသီးခူးကာမွို့တကျရောငျးသညျလညျးရှိ၏။ ထိုရုံးပတီသီးကိုအစိမျးစားသုံးမိပါကဘေးထှကျဆိုးကြိုးကိုခံရမညျဖွဈ၏။ ထို့ကွောငျ့ရုံးပတီသီးကိုအစိမျးကွိုကျပါကနာရီဝကျခနျ့ဆားရညျစိမျစားသုံးပါရနျ တောငျသူဦးကွီးတဈယောကျ၏ပွောပွခကျြအားမြှဝလေိုကျပါသညျ။ စာဖတျသူမြားကလညျးပွနျလညျမြှဝပေေးကွပါအုံးလို့မတ်ေတာရပျခံပါရစေ။ Credit ======================== ရုံးပတီသီးကိုအစိမျးလိုကျတို့စားရတာကွိုကျရငျဒီစာလေးကိုဖတျကွပါ ကြှနျတျောရှာရောကျတော့ရုံးပတီသီးစိုကျသညျ့တောငျသူတဈဦးမှပွောပွသဖွငျ့ထပျဆငျ့မြှဝခွေငျးဖွဈပါသညျ။ ရုံးပတီသီးကိုအစိမျးတို့စားရတာကွိုကျသညျဆိုကရုံးပတီသီးကိုဆားရညျဖွငျ့နာရီဝကျခနျ့စိမျပွီးမှစားပါရနျအကွံပေးပါသညျ။ ရုံးပတီသီးကွိုကျသောပိုးမှားမြားတှငျလှေးပိုးသညျနှိမျနငျးရနျအခကျခဲဆုံးပိုးဖွဈ၏၊
September 25, 2021 September 25, 2021 Anonymous
၁ကွကျသှနျဖွူသှေးတိုးရှိတယျဆိုရငျ နစေ့ဉျဟငျးလြာမှာ ကွကျသှနျဖွူအမွဲပါသငျ့ပါတယျကွကျသှနျဖွူဟာကိုလကျစထရောကိုလြှော့ခနြိုငျသလိုသှေးပေါငျခြိနျကိုလညျးအမွဲထိနျး ပေးပါတယျ၂ကွကျသှနျနီနဲ့ပြားရညျကွကျသှနျနီနဲ့ပြားရညျကိုလညျး နစေ့ဉျ သုံးစှဲပေးသငျ့ပါတယျကွကျသှနျနီအရညျကို ပြားရညျနှဈဇှနျးနဲ့ နစေ့ဉျသောကျပေးသငျ့ပါတယျ ၃မုနျလာဥနီမုနျလာဥနီဖြျောရညျကိုတဈနနှေ့ဈခှကျသောကျသငျ့ပါတယျ၎ဆားနစေ့ဉျခကျြပွုတျနတေဲ့ဟငျးလြာထဲဆားနဲ့ အငနျထညျ့ခွငျးကိုတော့လြှော့ခရြမှာဖွဈပါတယျ ၁ကြက်သွန်ဖြူသွေးတိုးရှိတယ်ဆိုရင် နေ့စဉ်ဟင်းလျာမှာ ကြက်သွန်ဖြူအမြဲပါသင့်ပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူဟာကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချနိုင်သလိုသွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်းအမြဲထိန်း ပေးပါတယ်၂ကြက်သွန်နီနဲ့ပျားရည်ကြက်သွန်နီနဲ့ပျားရည်ကိုလည်း နေ့စဉ် သုံးစွဲပေးသင့်ပါတယ်ကြက်သွန်နီအရည်ကို ပျားရည်နှစ်ဇွန်းနဲ့ နေ့စဉ်သောက်ပေးသင့်ပါတယ် ၃မုန်လာဥနီမုန်လာဥနီဖျော်ရည်ကိုတစ်နေ့နှစ်ခွက်သောက်သင့်ပါတယ်၎ဆားနေ့စဉ်ချက်ပြုတ်နေတဲ့ဟင်းလျာထဲဆားနဲ့ အငန်ထည့်ခြင်းကိုတော့လျှော့ချရမှာဖြစ်ပါတယ် Respectfully crd to original uploader.
ကမ်ဘာတဈဝှမျးမှာအဖွဈမြားနတေဲ့ဆီးခြိုရောဂါကိုခံစားရပွီဆိုတဲ့အခါအသကျအန်တရာယျမရှိစဖေို့အတှကျအစား သောကျကိုအထူးဆငျခွငျရပါတယျဒါ့အပွငျဆေးကိုလညျး အမွဲမှီဝဲနရေပွီးဘယျတော့မှမထေ့ားလို့မရပါဘူးဒါပမေယျ့ ရုံးပတသေီးရဲ့အသားနဲ့ အစတှေ့မှောဆီးခြိုကိုဟနျ့တားပေးနိုငျတဲ့အစှမျးသတ်တိတှရှေိပါတယျဒီလိုရုံးပတသေီးကိုရနေဲ့စိမျ ပွီးသောကျသုံးပေးခွငျးကသှေးခြိုကိုလြော့နညျးစပေါတယျဒါကွောငျ့ ဆီးခြိုကိုသကျသာစမေယျ့ရုံးပတသေီးအရညျကို အိမျမှာကိုယျတိုငျဖြျောသောကျကွညျ့လိုကျရအောငျပါပါဝငျ ပစ်စညျးမြားရုံးပတသေီးအလယျအလတျအရှယျ၎/၅တောငျ့ ရတေဈခှကျဆားငရုပျကောငျးပွငျဆငျပုံ၁။ရုံးပတသေီးတောငျ့မြားကိုသခြောပွောငျစငျသှားအောငျရနေဲ့ဆေးလိုကျပါ ၂။ဖငျပိုငျးတှကေို လှီးထုတျပဈလိုကျပွီးအလယျကနထေကျခွမျးခွမျးလိုကျပါနောကျထပျအလယျကနထေကျခွမျးလိုကျပါ၃။ရထေညျ့ထားတဲ့ ခှကျတဈခှကျကိုယူလိုကျပွီးရုံးပတသေီး စိတျတှကေိုထညျ့ပါ။၄။ရုံးပတသေီးတှကေိုရထေဲမှာ၈နာရီကွာစိမျထားလိုကျပါဆန်ဒရှိပါကတဈရကျကွာလညျးထားပေးနိုငျပါတယျ၅။နောကျတဈနမေ့နကျရောကျသညျ့အခါရုံးပတေ သီးတှကေိုဆယျလိုကျပွီးခှကျထဲကိုအရညျပွနျညှဈခလြိုကျပါပွီးရငျတော့အဖတျတှကေိုလှငျ့ပဈနိုငျပါတယျ၆။ရလာတဲ့အရညျကိုဖနျခှကျတဈခုထဲပွောငျးထညျ့ပွီးရငျအာဟာရဓာတျ တှပွေညျ့တဲ့ရုံးပတသေီးအရညျကိုသောကျသုံးနိုငျပါပွီပေါ့တယျလို့ထငျပါကဆား၊ငရုပျကောငျးတို့ကိုထညျ့သှငျးပေးနိုငျပါတယျခရဈတဈ Respectfully crd to original uploader.